Ads UptoDate – ADS Myanmar Blog
Category: Ads UptoDate
Congratulations ပါ အစ်မ မနီလာဝင်းနိုင်ရေ!
ဒီပြိုင်ပွဲလေးမှာ ပါဝင်ဆင်နွှဲပေးခဲ့ကြတဲ့ တစ်ဦးချင်းစီတိုင်းကို
ads.com.mm user တွေအတွက်
လစဉ် ဒီလို အစီအစဉ်မျိုးလေးတွေ ကျင်းပပေးနေတာမို့
Author JasminePosted on February 17, 2017 Categories Ads, Ads UptoDate, News, News and PressLeaveacomment on Congratulations ပါ အစ်မ မနီလာဝင်းနိုင်ရေ!
AVA Ticket (၂)ဦးစာ ရယူပြီး New Year Count Down ကို ပါဝင်ဆင်နွှဲလိုက်ပါ
EDM ပွဲတွေကိုမှ ခရေဇီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက်
New Year မှာ အပြတ် rave နိုင်မယ့် AVA ပွဲကို သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့တူတူ
ဒါဆိုရင် အခမဲ့ Rave လို့ရအောင်
အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို ads.com.mm ရဲ့ ဖေ့ဘွတ်ခ်ပေ့ခ်ျမှာ
ဒီလင့်ခ်အတိုင်း http://bit.ly/2hq2MMI ဝင်ကြည့်ကြည့်လိုက်နော်။
Author JasminePosted on December 21, 2016 December 21, 2016 Categories Ads UptoDateTags AVA, EDM, LuckydrawLeaveacomment on AVA Ticket (၂)ဦးစာ ရယူပြီး New Year Count Down ကို ပါဝင်ဆင်နွှဲလိုက်ပါ
ချောင်းသာဟန်းနီးမွန်းခရီးစဉ် (နှစ်ဦးစာ) ကံထူးရှင်ပေါ်ထွက်လာပါပြီ
ads.com.mm မှာ ပစ္စည်းတင်ရောင်းပြီး ချောင်းသာဟန်းနီးမွန်းခရီးစဉ် (နှစ်ဦးစာ) ကံထူးသွားသူကတော့
Ko Sai ဖြစ်ပါတယ်။ Congratulations ပါရှင့်။ ဒီခရီးစဉ်မှာတော့ ချောင်းသာရှိ အဆင့်မြင့်ဟိုတယ်မှာ
နှစ်ညတာ အခမဲ့ တည်းခိုခွင့်နှင့်အတူ ချာင်းသာ – ရန်ကုန် ကားလက်မှတ်များ ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Author JasminePosted on December 20, 2016 Categories Ads UptoDateTags WinnerLeaveacomment on ချောင်းသာဟန်းနီးမွန်းခရီးစဉ် (နှစ်ဦးစာ) ကံထူးရှင်ပေါ်ထွက်လာပါပြီ